तपाई कस्तो प्रेम गरिरहनु भएको छ ? एकपल्ट अवश्य पढ्नुहोस् - Namaste Times
बिहिबार, चैत्र ०७, २०७५ | Tuesday, April 3, 2018
तपाई कस्तो प्रेम गरिरहनु भएको छ ? एकपल्ट अवश्य पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र २०, २०७४ समय: १४:१७:२१
एजेन्सी – प्रेम आफैंमा एक यस्तो चिज हो, जसमा भावना र अनुभव (फिलिङ) जोडिएको हुन्छ । प्रेममा परेका मानिसहरुलाई यस्तो लाग्छ मानौं उसको वरिपरि चारैतिर मात्र प्रेम छ ।
तर के तपाईलाई थाहा छ प्रेम कति प्रकारको हुन्छ ? या तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ कि मैले कस्तो प्रकारको प्रेम गरिरहेको छु ? पक्कै पनि हरेक मान्छेको मनमा आफूले गरिरहेको प्रेम कस्तो प्रकारको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । तर धेरैजसोले त्यसको जवाफ पाउँदैनन् । जान्नुहोस् प्रेमको बारेमा :
जब कुनै जोडी प्रेममा परेपछि पश्चाताप, दुख या पीडामा हुन्छ भने यस्तो अवस्थालाई खाली (रित्तो) प्रेम भन्न सकिन्छ । बाध्यताबस प्रेमी भइरहनुपर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यसलाई खाली प्रेम भनिन्छ ।
यस्तो प्रेम गर्नेहरु आफ्नो आदर्श, आवश्यकता र भौतिक चाहनाबाट निर्देशित हुन्छन् । जस्तै कुनै साकाहारी केटीले साकाहारी केटालाई नै प्रेम गर्नु यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । किनकी त्यहाँ त्यसको आदर्शले काम गरेको हुन्छ ।